Barista & Barashada - Dugsiyada Dadweynaha Aagga Wanaagsan ISD 834
Bar carruurta si ay u noqdaan bartayaal cimri dheer
Guul & Is -dhexgal
QiimeeyahaT & Tijaabinta
Si Fiican U Akhri Fasalka Saddexaad
Wareegga Dib -u -eegista Manhajka
Waxbarashada Ameerikaanka ah
606 Siyaasadda: Xulashada iyo Dib -u -eegista Khayraadka Waxbarashada
Dib u eegista Joogtaynta
Siyaasadda la qaatay: 3-29-79
Wax laga beddelay: 5-08-85
Wax laga beddelay: 7-27-95
Wax laga beddelay: 6-24-99
Wax laga beddelay: 8-07-03
La tiriyay: 3-11-21
Waa siyaasadda ISD 834 in ay aqoonsan tahay baahida loo qabo bixinta agab waxbarasho oo tayo leh oo taageera ISD 834's Mission, Values Core, iyo barnaamijka waxbaridda.
Khayraadka ayaa kor u qaadi doona barashada iyo fikirka muhiimka ah waxayna kor u qaadi doontaa dulqaadka, ixtiraamka, iyo fahamka dhammaan shakhsiyaadka iyo kooxaha. Khayraadka waa in la xushaa si ay u keenaan isku xidhnaan, hadal, iyo diiradda geedi -socodka baridda.
Guddiga Waxbarashada ISD 834 ayaa sharci ahaan mas'uul ka ah hawlgelinta dugsiyada. Khayraadka la xushay waa inay la jaanqaadaan Hawlgalka ISD 834 iyo Qiimayaasha Muhiimka ah waxayna ku biiriyaan barnaamijka waxbaridda ee loo isticmaali doono.
Guddiga Waxbarashada ISD 834 wuxuu ku farayaa Kormeeraha/qofka loo xilsaaray inuu hirgeliyo xeerarka iyo habraacyada bixiya:
Qeexidda ilaha waxbarashada:
Qalab lagu taageerayo habka waxbaridda (Xeerka I)
U wakiishay shaqaale wax baray oo shahaado ka haysta guddiga dugsiga (Xeerka II)
Khayraadka la xushay oo ku salaysan shuruudo gaar ah (Xeerka III)
Hababka xulashada/adeegsiga/haynta (Xeerka IV)
Dib -u -eegista Khayraadka Waxbarashada iyo Codsiga Tacliin Kale
Fursadda dib -u -eegista manhajka iyo codsashada waxbarid kale
Nidaamka loolanka (Xeerka VI)
Geedi socodka si looga horyimaado khayraadka la doortay
Tilmaamaha ku saabsan dib -u -dhaca, burburay, ama alaabta lumay (Xeerka VII)
HABRAACYADA IYO XEERARKA MAAMUL
La korsaday: 7-27-95
Qeexidda Khayraadka Waxbarashada:
Ilaha waxbarashada waxaa lagu qeexaa wax kasta oo la akhriyo, la dhegeysto, la marsiiyo, la fiiriyo ama loo isticmaalo ardaydu oo qayb ka ah hannaanka waxbaridda ee fasalka dhexdiisa iyo hawlaha uu dugsigu kafaalo qaaday.
Ilaha waxbarashada waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn buugaagta, wargeysyada, filimada/ fiidyowyada, Internetka, barnaamijyada telefishanka, iyo daabacaadda kale, aan la daabicin, ilaha elektiroonigga ah, iyo safarada dibadda iyo kuwa ku hadla.
Mas'uuliyadda xulashada ilaha wax -baridda waxaa loo xilsaaray shaqaale macallin oo shahaado haysta. Masuuliyadda isku -duwidda iyo ku -talinta xulashada iyo soo -iibinta buugaagta wax -barashada iyo ilaha kale ee wax -barashada waxaa iska leh macallinka (yada) ku habboon, khabiirka warbaahinta maktabadda, guddoomiye waaxeed, guddiyada manhajka, iyo Agaasimaha Manaahijta iyo Tilmaamaha ee degmada. Guddiga dugsiga ee Dugsiga Madaxa -bannaan ee Degmada 834 wuxuu aqoonsan yahay in xorriyadda wax -kala -doorashada ilaha waxbarasho ee kala duwan ay tahay qayb ka mid ah bulshada xorta ah. Macallimiinta, marka loo eego tababarkooda iyo waaya -aragnimadooda, ayaa si fiican ugu qalma inay doortaan ilaha waxbarashada si loogu isticmaalo
ardaydooda. Macalimiintu waxay dooran doonaan ilaha waxbarashada si loogu isticmaalo ardaydooda sida lagu qeexay shuruudaha xulashada/adeegsiga/haynta Xeerka III.
Waxyaabaha loo yaqaan muran, oo khuseeya nuxurka koorsada, ayaa laga yaabaa in lagu soo bandhigo bandhigyada fasalka iyo wada -xaajoodka ka dib la -tashiyada iyo oggolaanshaha maamulaha dhismaha.
Dhammaan shaqaalaha la caddeeyey ee degmada waxay raaci doonaan habraaca xulashada ilaha sida ku qeexan siyaasaddan. Taageerada degmo dugsiyeedka waa la hubaa ilaa iyo inta la raacayo xeerarka iyo habraacyada ku xusan xeerkan.
Khayraadka la xushay/la adeegsaday/la hayn doono:
la jaanqaado Hawlgalka Degmada 834 iyo Qiimayaasha Muhiimka ah
noqo agab tayo leh, ku habboon heerka waxbaridda oo ku habboon manhajka
ku habboon da'da, horumarka bulshada iyo bisaylka dadka isticmaala
lagu xukumo wadar ahaan halkii laga noqon lahaa qayb ahaan
waxay matalaan aragtiyo kala duwan iyo muujinta si kor loogu qaado barashada, fekerka muhiimka ah iyo qiimeynta ujeeddada
kor u qaadida dulqaadka, ixtiraamka iyo fahamka shaqsiyaadka iyo kooxaha
waxay ka tarjumayaan taariikhda, dhaqanka iyo waxtarka xubnaha bulshada kala duwan
loo isticmaalo hab u saamaxaysa ardayda inay aqoonsadaan eexda iman karta
Bixiyaan asalka macluumaadka loogu talagalay in lagu dhiirrigeliyo ardayda:
baaraan dabeecadaha iyo dabeecadaha u gaarka ah
fahmaan waajibaadkooda, waajibaadkooda, xuquuqdooda iyo mudnaanta ay ku leeyihiin bulshada dimoqraadiga ah
Intaa waxaa dheer, kheyraadka loo isticmaalo fasalka oo ay ku jiraan falalka rabshadaha ee aan qiimaha lahayn, falalka galmada ee cad, iyo/ama luuqad -xumada waxaa loo tixgelin karaa muran waxaana laga yaabaa in lagu soo daro fasalka kadib la -tashiga maamulaha dhismaha iyo ogeysiiska waalidka (eeg Xeerka V). Filimmada iyo fiidyowyada iyo telefishinka ayaa loo dooran doonaa/loo adeegsan doonaa qiimahooda waxbarasho halkii loo adeegsan lahaa oo keliya ujeeddooyin madadaalo gudahood maalinta waxbaridda.
Macallinku wuxuu xaq u leeyahay inuu doorto ilo uu rumaysan yahay inay kor u qaadi doonto wax -ku -oolnimada ujeeddooyinka manhajka. Macallinku wuxuu aqoonsan yahay mas'uuliyadda ka saaran adeegsiga garashada wanaagsan xulashada/adeegsiga/haynta khayraadka. Macallinka shaki ka qaba ku -talinta adeegsiga kheyraadka qaarkood oo laga yaabo in fasalka dhexdiisa lagu muransan yahay ayaa la tashan doona maamulaha dhismaha ama qofka loo xilsaaray oo go'aamin doona tallaabada xigta ee tallaabada. Tan waxaa ka mid noqon kara ogeysiiska waalidka si waalidka ama mas'uulka ay u helaan fursad ay dib ugu eegaan maaddada ayna u diyaarsadaan waxbarid kale (eeg Xeerka V).
Khayraadka hadiyadda waxaa lagu qiimayn doonaa shuruudaha xulashada/adeegsiga/haynta waana in la aqbalo ama la diido iyadoo lagu saleynayo. (eeg Xeerka III).
Xulashada/adeegsiga/haynta ilaha barnaamijyada waxbaridda, shaqaalaha xirfadda leh ayaa marka ay khuseyso:
qiimeeyo baahida manhajka
qiimee ilaha jira si loogu habboonaado waxbarashada
hordhac ama baadh kheyraadka (mar kasta oo ay suurtogal tahay)
dooro, adeegso oo xafid kheyraadka si waafaqsan shuruudaha (eeg Xeerka III)
iskaashi la samee haddii ay suurtogal tahay wakaaladaha kale sida ururada kale ee xirfadda leh, maktabadaha, saldhigyada xogta elektarooniga ah
tixraac faallooyin sumcad leh, oo si xirfadaysan loo diyaariyey
adeegso guddiga la -talinta manhajka iyo/ama waaxyaha si ay u wada shaqeeyaan oo ay uga caawiyaan xulashada kheyraadka wax -barashada
ka saar kheyraadka oo aan hadda ahayn qiime waxbarasho
fiiri filimada/fiidiyaha gabi ahaanba ka hor intaan la isticmaalin si loo go'aamiyo inay buuxiyeen shuruudo (eeg Xeerka III)
Waalidiinta, dadka ardayda masuulka ka ah ama ardayda qaangaarka ah, ee jira 18 sano ama ka weyn, waxay dib u eegi karaan waxa ku jira ilaha waxbarashada ee fasalka lagu isticmaalo. Diyaarinta dib -u -eegista ilaha waxaa lala samayn karaa shaqaalaha dugsiga wakhti kasta. Shaqaalaha dugsigu waxay waalidka ku wargelin doonaan isticmaalka ilaha waxbarashada ee loo yaqaanno muran. Ogeysiiskaan waxaa loo diri doonaa waqti ku habboon, si waalidiintu ay fursad ugu helaan inay dib u eegaan kheyraadka iyo/ama doortaan waxbarid kale ka hor intaan fasalka lagu isticmaalin.
Haddii waalidka, mas'uulka ama ardayga qaangaarka ahi ay diidaan nuxurka agabka waxbaridda, waxbarid kale ayaa la codsan karaa.
Tacliin kale ayaa laga yaabaa inuu bixiyo waalidka, mas'uulka, ama ardayga qaangaarka ah haddii waxbaridda kale, haddii ay jirto, ee ay bixiyaan guddiga dugsigu aysan buuxin welwelka waalidka, mas'uulka, ama ardayga qaangaarka ah.
Guddiga dugsiga looma baahna inay bixiyaan kharashaadka waxbaridda kale ee uu bixiyo waalidka, mas'uulka ama arday qaangaar ah.
Shaqaalaha dugsigu kuma soo rogi karaan ciqaab tacliimeed ama ciqaab kale ardayga kaliya si uu u diyaariyo waxbarid kale. Shaqaalaha dugsiga ayaa qiimeyn kara oo qiimeyn kara tayada shaqada ardayga.
Qoraalka Hannaanka iyo Cidda ay khuseyso
Xeerarka iyo xeerarka maamulka ee u adeegaha siyaasaddan ayaa bixiya habraacyada ay ardeyda, waalidiinta, mas'uuliyiinta ama shaqaaluhu ka codsan karaan dib u eegista ilaha waxbarashada. Haddii ay dhacdo in kheyraadka lagu murmo sababahan awgood, Xuquuqda Wax -ka -Beddelka Koowaad ee Dastuurka Mareykanka ee Mareykanka ayaa ah muhimadda koowaad. Xuquuqdan waxaa lagu sii qeexay Xeerka Maktabadda ee Ururka Maktabadda Ameerika iyo Siyaasadda Guddiga Waxbarashada Minnesota ee Xorriyadda Wax -baridda, Wax -barashada, iyo Fikradaha Dugsiyada Dadweynaha.
Caqabada waxaa lagu qeexaa inay tahay qoraal ama hadal hadal ah oo ka soo horjeeda kheyraadka codsanaya in laga reebo, lagu daro, ama la xaddido. La -tartamehu waa inuu noqdaa waalid, mas'uul, arday qaangaar ah ama shaqaale ka tirsan degmada dugsiga oo diidan in lagu daro ama laga saaro ilaha waxbaridda ee barnaamijka waxbarashada degmada. Kaliya tartame ayaa soo saari kara caqabad.
Habka Tallaabo Tallaabo Marka Caqabad Dhacdo
Tallaabada 1: Cidda la tartameysa waxaa lagu hagi doonaa lagana caawin doonaa la kulanka macallinka (yada) ku habboon, khabiirrada warbaahinta maktabadda ama macallimiinta kulanka xog -doonka ee ku saabsan adeegsiga kheyraadka la is -weydiinayo. Xubinta shaqaaluhu waxay isla markiiba la talin doontaa maamulaha dugsiga ama qofka loo xilsaaray loolanka ka dibna isku day inuu arrinta si aan rasmi ahayn u xaliyo si xushmad leh.
Tallaabada 2: Ka dib marka la akhriyo ama la fiiriyo waxyaabaha la xujeeyey gabi ahaanba, qofka la tartamaya waxaa la siin doonaa nuqul ka mid ah siyaasaddan waxaana laga yaabaa inuu u soo gudbiyo foomka “Qoraalka Walaaca Ku Saabsan Khayraadka Waxbarashada” maamulaha dugsiga ku lug leh. Shaqaalaha shahaado haysta ee ku lug leh ayaa maamulaha u soo gudbin doona foomka “Jawaab -celinta Shaqaalaha ee Khayraadka Caqabadaha ah” shan (5) maalmood oo shaqo gudahood marka la helo “Qoraalka Walaaca Ku Saabsan Khayraadka Waxbarashada.” Maamulaha ayaa ku wargelin doona kormeeraha guud iyo shaqaalaha kale ee ku habboon caqabadda. Nuqul dhammaystiran oo ah “Jawaabta Shaqaalaha ee Khayraadka Caqabadaha ah” ayaa la siin doonaa qofka tartamaya.
Tallaabada 3. Marka la helo foomamka la dhammaystiray, maamulaha ayaa codsan doona dib -u -fiirinta waxyaabaha la murmay Guddiga Dib -u -Eegista Kheyraadka shan iyo toban (15) maalmood oo shaqo gudahood. Waxay ku xirnaan doontaa ikhtiyaarka maamulaha ku lugta leh haddii loo isticmaali doono iyo in kale kheyraadka la murmay inta lagu guda jiro hawsha dib -u -eegista. Xubinnimada guddigu waxay ka koobnaan doontaa maamulaha, khabiirka maktabadda/warbaahinta, laba waalid, arday markay ku habboon tahay, iyo saddex macallin oo maamulaha uu magacaabay. Ma jiro xubin guddi ah oo qayb ka noqon doona codsiga kheyraadka la murmay ee dib -u -eegista.
Tallaabada 4. Marka la helo foomamka la dhammaystiray, Guddiga Dib -u -eegista Kheyraadka ayaa qaadi doona tallaabooyinka soo socda: b) Ku martiqaad tartamayaasha iyo shaqaalaha la xaqiijiyay shirarka guddiga inay yihiin goobjoogayaal haddii ay rabaan inay goobjoog ka ahaadaan ujeeddooyin caddayn. c) Fiiri oggolaanshaha guud ee kheyraadka adiga oo akhrinaya dib -u -eegista iyo la -talinta liisaska lagu taliyey. d) In la go'aamiyo heerka ay kheyraadku taageerto manhajka oo buuxiyo shuruudaha xulashada/isticmaalka/haynta (eeg Xeerka III). e) Dib -u -fiirinta “Qoraalka Walaaca” iyo “Jawaabta Shaqaalaha ee Khayraadka La -Hortagay” iyadoo ay joogaan shaqaale shahaado haysta iyo tartame haddii ay rabaan inay goob -joog ka ahaadaan si ay u ilaaliyaan dacwadda. f) Buuxi foomka “Jawaabta Guddiga Dib -u -eegista Kheyraadka”, adiga oo ku qiimaynaya maaddada xooggeeda iyo qiimaheeda guud ahaan oo aan qayb ahaan ahayn. g) U soo bandhig go'aan go'aan qoraal ah labaatan (20) maalmood oo shaqo gudahood laga bilaabo markuu maamulaha helay foomka “Qoraalka Walaaca Ku Saabsan Khayraadka Wax -barashada” ka dib shirkii guddiga dib -u -eegista kheyraadka.
Tallaabada 5 . Guddiga dugsigu waa inuu ogeysiiyaa loolanka marka loolanka uu tixgelin doono guddiga. Go'aan kasta oo ay gaaraan guddiga dugsigu wuxuu noqonayaa kama -dambays.
Tilmaamaha Ku Saabsan Khayraadka Waxbarshada ee Daahay, Waxyeelloobay ama Lumay
Agabyada waxbaridda ama qalabka xarunta warbaahineed ee la siiyo ardayda ayaa mas'uul ka ah ardayga. Lumis ama dillaac iyo dillaac aan macquul ahayn waxay keeni doontaa in ardayga si habboon loogu qiimeeyo kheyraadka. Cawaaqibku wuxuu ka dhalan karaa ku guuldaraysiga magdhowga dugsiga degmada ee buugaagta wax lagu barto ama alaabta maktabadda.
Bayaanka Walaaca Ku Saabsan Foomka Khayraadka Waxbarashada
Guddiga La -talinta Waalidka Ameerikaanka ah (NAPAC)
NAPAC waa guddi sharci ahaan loo igmaday oo ka kooban waalidiinta Hindida Ameerika, awooweyaasha, ayeeyooyinka, odayaasha, ardayda, iyo xubnaha bulshada; oo leh macalimiinta degmada iyo shaqaalaha.
Qabiilada matala waxaa ka mid ah: Dakota, Ho Chunk, Lakota, Menominee, Mi'kmaq, Mississippi Choctaw, Ojibwe
NAPAC waa shabakad fidsan oo ka badan 100 waalidiin Ameerikaan ah ama ilaaliyeyaal leh ardayda Dugsiyada Dadweynaha ee Aagga Stillwater.
Aragtidayadu waxay tahay in dhammaan ardayda asaliga ah ee degmada ku nool ay ka qalin -jabin doonaan dugsiga sare ayna diyaar u yihiin kulliyad ama shaqo. Stillwater NAPAC waxay si dhow ula shaqaysaa maamulayaasha degmada dugsiga iyo barayaasha si ay u taageeraan Barnaamijka Waxbarashada Hindida Maraykanka:
Xaqiiji manhajka fasalka
In kor loo qaado xirfadaha ardayga Asaliga ah si kor loogu qaado guusha waxbarasho
Qorshee oo fuliya dhacdooyinka bulshada
Horumarinta iyo kobcinta iskaashiga iyo wacyigelinta
Hubi in aqoonta dhaqanka kor loo qaaday ee ardayda Asaliga Maraykanka ah iyo bulshada weyn
Kor u qaad oo taageer guulaha tacliimeed ee ardayda Asaliga ah ee Maraykanka
Kordhi heerka qalin -jabinta iyo soo -dhawaanshaha guulaha tacliimeed ee ardayda Asaliga ah ee Mareykanka oo u dabaaldeg guusha ardayga!
Kala xiriir Eric Anderson at andersone@stillwaterschools.org si aad u hesho macluumaad dheeraad ah
Agaasimaha Barista & Barashada
Agaasinka Shaqaalaha T&L
Ma xiisaysaa waxa ay carruurtu baranayaan?
Booqo Qorshe -hawleedka Qoyskaaga si aad u aragto dulmarka heerarka waxbarashada ee heerka fasalka, iyo sidoo kale sharraxaadda koorsada iyo waxyaabo kaloo badan. Khariidadeena Qoyska waxaa loogu talagalay inay kaa caawiso inaad hesho jawaabaha dhammaan su'aalahaaga la xiriira dugsiga.